सुरु भयो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मै जीन सिक्वेन्सिङ – Health Post Nepal
२०७८ असोज ११ गते १८:१५
नेपालमा सरकारी स्तरमा जीन सिक्वेन्सिङ परीक्षण सुरु भएको छ। अबदेखि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशालामा नै जीन सिक्वेन्सिङ परीक्षण गर्न सकिने छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय बायोटेक्नोलोजी विभागमा १६ र प्रयोगशाला २६ नयाँ नुमना जम्म गरी ४२ वटा नुमनाको जीन सिक्वेन्सिङ गरिएको प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले जानकारी दिइन।
भाद्र र असोजमा संकलन भएका सबै नुमनामा डेल्टा भेरियन्ट देखिएको छ। जीन सिक्वेन्सिङले कोरोना भाइरसको म्युटेशन पत्ता लगाउने मद्दत पुग्ने डा. झाले बताइन्।
नेपालमा यो भन्दा पहिले जीन सिक्वेन्सिङका उपकरण तथा परीक्षण उपलब्ध थिएन। कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाउन शुरु देखिनै विदेशमा नमुना पठाइने गरेको थियो। यो सँगै जीन सिक्वेन्सिङका परीक्षणका लागि अब विदेश जान नपर्ने भएको छ।
जीन सिक्वेन्सिङ किन गरिन्छ?
जीन सिक्वेन्सिङ भनेको भाइरसको जेनेटिक बनावटलाई डिकोट गर्ने परीक्षण हो। पीसीआर परीक्षणमा कोरोना भाइरसको जीन शरीरमा छ कि छैन जाँच गरिन्छ भने सिक्वेन्सिङमा जीनको बनावटको अध्ययन गरिन्छ।
कोराना भाइरसले आफ्नो जीनमा साना–साना परिवर्तन गरिरहन्छ। जसलाई म्युटेसन भनिन्छ। धेरै जस्तो म्युटेसनले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। तर, कहिलेकाहीँ यसरी भएको म्युटेसनले भाइरसको चरित्रमा ठूलो बदलाव ल्याइदिन्छ। जस्तै भाइरस बढी संक्रामक हुनसक्ने, छिट्टै फैलिन सक्ने, उपलब्ध औषधिले काम नगर्ने आदि हुन्।
भाइरसको परिवर्तित स्वरुपलाई नयाँ भेरियन्ट भनिन्छ। त्यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा नाम दिन्छ। नयाँ भेरियन्टले विश्व जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना भएमा त्यसलाई भेरियन्ट अफ कन्सर्नको संज्ञा दिइन्छ।